Iziko lokubhankisha: yintoni kwaye loluphi uhlobo lweebhanki ezikhoyo eSpain | Ezezimali
Namhlanje, phantse wonke umntu uneakhawunti yebhanki. Oku kunxulunyaniswe nebhanki, okanye ibhanki, inoxanduva lokuqinisekisa ukuba iakhawunti yakho ikhuselekile kwaye nemali ekuyo iyaqhubeka ukuba unayo kuyo nayiphi na into oyifunayo.
Nangona kunjalo, Yintoni enye oyaziyo ngebhanki? Ngaba uyazi iindidi ezahlukeneyo zezinto? Okanye zonke iinkonzo abanokubonelela ngazo? Oko, nokunye okuninzi, yinto esiza kuthetha ngayo ngokulandelayo.
1 Yintoni iqumrhu lebhanki
2 Wenza ntoni umbutho webhanki
2.1 Imisebenzi yoxanduva
2.2 Ukusebenza kweeasethi
3 Iindidi zamashishini ebhanki
3.1 Ukuthengisa ngebhanki
3.2 Ukubhankisha inkampani
3.3 Ukugcina imali yabucala
3.4 Utyalo-mali ebhankini
4 Izinto zebhanki eSpain
5 Izinto zebhanki zamanye amazwe ezisebenza eSpain
Yintoni iqumrhu lebhanki
Iziko lebhanki laziwa ngcono ngegama eliqhelekileyo, ibhanki, nangona isenokuba namanye amagama anje ngeziko lokuthenga ngetyala okanye iziko lokugcina imali. Yi Inkampani yezemali ejongene nokunikezela ngeenkonzo zezemali kubaxhasi, ezinje ngemalimboleko, iikhredithi ... Kananjalo nokukhathalela ukugcina imali ebekwe kubo ikhuselekile kubathengi.
Iinjongo zebhanki kukulawula imali yabathengi ngendlela ethi iyisebenzise ukuyiboleka abanye.
Wenza ntoni umbutho webhanki
Ukuthetha ngokuthetha, ibhanki ineentlobo ezimbini zemisebenzi:
Imisebenzi yoxanduva. Ehambelana nokuqokelela imali ebantwini okanye kumaziko, kwiinkampani, kwimibutho, njl.
Ukusebenza kweeasethi. Kwaye baphethe ngokubolekisa loo mali bayithimbele umntu wesithathu, uhlala ekwixabiso eliphezulu, ukufumana inzuzo yokwenza oko kuthengiselana kwaye, nangenxa yomngcipheko abawuqhubayo.
Ukuba siphula imisebenzi yamatyala ebhanki, uya kubona ukuba ibhekisa ekutsaleni abathengi kwaye, kunye nabo, nezixhobo. Eli nqanaba kulapho iiakhawunti zebhanki, iiakhawunti zokonga, amakhadi ebhanki, iidipozithi zexesha elide zingena ...
Ngamanye amagama, sithetha ngabo Iinkonzo ezinikezelwa kubathengi ezibandakanya ukushiya isixa esithile semali esifakwe ebhankini. Oku kuya kuhlala kufumaneka kubathengi, abanokuthi bayirhoxise nanini na befuna. Kodwa, okwangoku, yinxalenye yemali ebhankini ekufuneka iboleke umntu wesithathu imali (leyo iya kuba yimisebenzi esebenzayo).
Njengoko sele sithethile, ibhekisa ku- imisebenzi enxulumene nemboleko yemali. Oko kukuthi, bazama ukuhambisa imali ngokuboleka abanye abantu kwaye bafumane uthotho lwezibonelelo ngokwenza njalo.
Kule ndlela yokusebenza, umzekelo, iikhredithi kunye nemigca yetyala, iimali-mboleko, izinto ezibambekayo ... Kunye nabo, into abayenzayo kukuba banike imali kuye nabani na oyifunayo ngenjongo yokufumana inzala ehlawulwe ngulowo ufuna loo mali, yintoni Ibhanki ngokwayo iyayifumana ngokulawula le nkqubo kwaye ithathe umngcipheko ukuze loo mntu abuyise imali ayifumeneyo.
Iindidi zamashishini ebhanki
Ngoku masizazi iintlobo ezahlukeneyo zezinto zebhanki. Kwaye, nangona ungakholelwa, Iibhanki njengoko uzazi ayizizo zodwa eziwela ngaphakathi kwale mbono, kodwa kuninzi ngakumbi.
Ke, unokufumana oku kulandelayo:
Olu hlobo lwebhanki lolona luxhaphakileyo, kwaye lowo wazi kakuhle. Ngapha koko, umvuzo wakho, ipenshoni, okanye umvuzo uphelela kwiakhawunti yebhanki enjalo. La ngamaziko apho abathengi ngabantu babucala.
Ngokukodwa, kunjalo ezo bhanki apho unokuvula iakhawunti yebhanki, ucele imali-mboleko okanye iikhredithi, njl. Basebenza kuphela kubantu abathile, nangona kukho iinkonzo zabasebenzi abazimeleyo kunye neenkampani (nangona le yokugqibela ihlala ikhetha olunye uhlobo lwebhanki).
Kule meko, kwaye njengoko besesikuxelele ngaphambili, luhlobo lwe into yebhanki egxile kwiinkampani. Nangona banokuba neenkonzo ezifanayo njengasebhankini yokuthengisa, banenye ikhathalogu yeenkonzo ezinxulumene neenkampani ezinje ngerholo, ugqithiso oluninzi, iPOS ebonakalayo yokuthengisa kwi-Intanethi, njl.
Ngamanye amagama, yonke into efunwa ziinkampani ebhankini ukuze ikwazi ukuqhuba nokwenza intengiselwano, nokuba ngabaxhasi bayo okanye ngabasebenzi bayo.
Ukubhankisha kwangasese kuyinxalenye yeebhanki zentengiso. Nangona kunjalo, igxile kwinxalenye ethe ngqo: abo bantu banobutyebi obukhulu okanye ubutyebi. Kule meko sinokuthi ziibhanki ezinikezela unyango olukhethekileyo kubaxumi bazo abazizityebi, kwaye, ngenxa yoko, bayazinyamekela.
Iinkonzo abazinikezela kubathengi zinokufana nakubantu kodwa, ngenxa yokuba "bakhethekileyo", banikezela ngezinye iintlobo zeemeko ezimnandi neziluncedo kubo, nokuba ngaba ziikomishini ezincinci, ngenzuzo enkulu, njl.
Ikwaziwa ngokuba yibhanki yeshishini, yile nto ujongene nokusebenzela amaziko asemthethweni kunye nolawulo kwiimfuno abanazo, ngakumbi ezinxulumene notyalo-mali. Umzekelo, ukudityaniswa, ukufunyanwa, utyalomali kwamanye amashishini, njl.
Izinto zebhanki eSpain
Ngoku ukuba uyazi ngcono ukuba yintoni na ibhanki kwaye ngakumbi iintlobo kunye nento eyenziweyo kuzo, lixesha lokuba wazi Zeziphi iibhanki ezikhoyo eSpain. Ngale ndlela, awuyi kwazi nje kuphela into ekhoyo, kodwa uya kubona ukuba zininzi iibhanki kunokuba unokwazi kuba ziviwa kakhulu, zinkulu okanye zibhengeza kakhulu.
Ngokukodwa, sithetha ngezi zinto zilandelayo:
I-A & G yeBhanki yabucala
Inkampani yeAbanca Banking
ICaixa Geral Bank
IBhanki yokuBambisana yaseSpain
Banco de Caja de España utyalomali eSalamanca naseSoria
Ibhanki yaseCastilla- La Mancha
IBhanki yokuSebenza yeNtengo ngeNtengo
Ibhanki yokugcina i-BBVA
Ibhanki yezeMali yaseYurophu
Ibhanki yaseFinantia Sofinloc
Ibhanki yezorhwebo yaseBilbao
Ibhanki yaseMare Nostrum
IBanco Pichincha eSpain
Ibhanki yabantu baseSpain
IBhanki yezeMali ye-BBVA
Ibhanki yokonga engafunekiyo kunye ne-MP
ICatalunya Banc (iCatalunya Caixa)
IColonya-Caixa d'estalvis de Pollensa
Ibhanki yeBhanki ye-EBN
Ibhanki yabucala edumileyo
Irente 4 yeBhanki
IMali yabathengi yeSantander
IiNkonzo zoKhuseleko lweSantander
Izinto zebhanki zamanye amazwe ezisebenza eSpain
Kule meko, kwaye ukuba awuyithandi nayiphi na into ebhankini eSpain, okanye ungusomashishini ohambahamba emhlabeni, kunokuba kubhetele ukuba ube unayo. iakhawunti kwibhanki yelinye ilizwe okanye yamanye amazwe. E-Spain uneentlobo ezimbini: kwelinye icala, ezo zineeofisi eSpain kwaye zisebenza elizweni, lolu luhlu esiza kukunika lona ngezantsi; Kwelinye icala, uneebhanki ezininzi ezisebenza ngaphandle kweofisi esekwe, kodwa wenze oko phantse.
Uluhlu lwezinto zebhanki zamanye amazwe ezisebenza eSpain zezi zilandelayo:
I-AKF yeBhanki iGMBH kunye neC
IBanca Nationale de Lavoro
I-Banque Marocaine yoRhwebo ngaphandle
Isidima seBhanki yabucala
IiNkonzo zeRBC Investor
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Banca » Ibhanki